Black က silicon carbide - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း Bosun ပွန်းစားခြင်း
silicon carbide, လင်းကျောက်သဲကနေဖန်ဆင်းတော်ရေနံ Coke (သို့မဟုတ် char), လျှပ်စစ်ကို arc မီးဖိုထဲရောစပ်မှု sawdust ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝတွင်ရှားပါး silicon carbide ဓာတ်သတ္တု moissanite လည်းရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် Moissanite အဖြစ်လူသိများ silicon carbide ။ မြင့်မားတဲ့နည်းပညာအတွက်ခေတ်ပြိုင်ကို C, N ကို, B, နှင့်အခြား Non-အောက်ဆိုဒ်ဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စည်းများအတွက်, silicon carbide အရှိဆုံးအသုံးများဆုံးနဲ့စီးပွားရေးအရတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ emery သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်သဲကိုခေါ်နိုင်ပါသည်။ silicon carbide မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ခုခံမီးဖိုထဲရောစပ်အတွက်လင်းကျောက်သဲ, ရေနံ Coke (သို့မဟုတ်ကျောက်မီးသွေးကတ္တရာစေး) နှင့်အတူရှိ, သစ်သား (အစိမ်းရောင် silicon carbide ဆားထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်) နှင့်အခြားကုန်ကြမ်း။ လက်ရှိတွင် silicon carbide တရုတ်နိုင်ငံ၏စက်မှုထုတ်လုပ်မှု, အနက်ရောင် silicon carbide နှင့်အစိမ်းရောင် silicon carbide နှစ်မျိုးခွဲခြားဆဋ္ဌဂံ crystals ဖြစ်ကြောင်း, 3.20 3.25 ရန်အဘို့အစာရင်းကိုင်, microhardness 2840 ဖြစ်ပါတယ် ~ 3320kg / mm2
grit အရွယ်အစား: 12 # -220 #;
Micropowder: 240 # -1200 # ။
ဆစ် 88% -97%,
Fe203 2.5% max ကို,
FC အသင်း 2.5% max ကို,
စို 1.0% max ကို။
Size ကို Range
100 ကို # -180 #
100 ကို # -80 #
တစ်ခုပွန်းစားခြင်းအဖြစ် 1. ထိုကဲ့သို့သောဒါပေါ်ဘီး, Whetstone, ကြိတ်, သဲ tile ကိုနှင့်ကြိတ်အဖြစ်ပွန်းစားခြင်း, များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သတ္တု deoxidizer နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ပစ္စည်းများအဖြစ် 2. ။
3. မြင့်သောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်တစ်ခုတည်းကြည်လင်ဆီမီးကွန်ဒတ်တာကုန်ထုတ်လုပ်မှု silicon carbide အမျှင်များထုတ်လုပ်အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
4. modifiers တစ် deoxidizer နှင့်သံမဏိအဖြစ်ဆီလီကွန် tetrachloride အောင်များအတွက်ပစ္စည်းများစတင်အဖြစ်အသုံးပြုသောသွန်းသံဖွဲ့စည်းပုံ, သုံးနိုင်တယ်, ဆီလီကွန်ဗဓေလသစ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အဓိကကုန်ကြမ်းဖြစ်ကြသည်။
သွယ်ဝိုက်အပူအဘို့ 5. မြင့်အပူချိန်ပစ္စည်းများ
ယခင်: Black ကလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်
ရောင်းရန်က Black silicon carbide
silicon carbide ၏စျေးနှုန်း
silicon carbide အမှုန့်
silicon carbide အမှုန့်စျေး
silicon carbide ရဲ့စျေး